Toekarena sy Fandraharahàna · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Marsa, 2018
Kazakhstan: Toetry Ny Firenena
Azia Afovoany sy Kaokazy 28 Marsa 2018
Tsy mandalo mihitsy eo ambany mason'ny mpitoraka bilaogy ny hetsika ara-politika goavana eo amin'ny firenena. Tamin'ity heriandro ity izao dia fotoana nandraisan'ny filoham-panjakana ao amin'ny firenena fitenenana. Tsy faly tamin'ny fandrakofan'ireo fantso-pahitalavitra sy ireo gazety rehetra eo ambany fanaraha-mason'ny fanjakana momba ilay fanentanana..... ny mpitoraka bilaogy.
Tajikistàna: Firenena Mahantra Manana Fitsaràna Lafo Indrindra
Manana loharanon-karena ampy i Tajikistàna, saingy ny kolikoly lalim-pàka no mahatonga ny vola azo amin'ireny loharanon-karena ireny tsy mameno afatsy ny paosin'ireo olona vitsivitsy
Korea: Ireo Orinasa Mitsikilo Ny Fivezivezenao Any An-Kabone
Ireo Orinasa Mitsikilo Ny Fivezivezenao Any An-Kabone ... Inona no hevitrao? Nahazao setriny mahaliana ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy koreàna miresaka ny momba ireo orinasa izay mitsikilo ny fihetsika tsirairay ataon'ny mpiasany.
Azia Atsimo 18 Marsa 2018
Raha mety ho foana amin'ny alàlan'ny asa mafy sy ny fahavononan'ny mahantra fotsiny ny fahantrana dia efa ela no foana ny fahantrana any amin'ny tany mahantra. Ireo mahantra any amin'ny tany andalam-pandrosoana no isan'ireo olona miasa mafy indrindra eto amin'ny planeta
Eman Hashim Mibilaogy Manohitra Ny Berlitz Ejypta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Marsa 2018
Nanimba ny lazan'i Berlitz Ejypta ve ny kolikoly? Nanoratra tao amin'ny facebook sy tao amin'ny bilaoginy ilay bilaogera Ejiptiana Eman Hashim, manontany tena ny amin'ny fomba nahazoan'ny mpianany ny naoty sy ny mari-pahaizana kanefa tsy nanome na ny naoty na ny taratasim-panadinana ho azy ireo mihitsy izy.
Azia Atsinanana 06 Marsa 2018
Ny vaovao farany avy any Korea Avaratra dia ny fisokafan'ny tambajotram-pinday Ejiptiana iray goavana sady haingam-pitosaka. Nahazo ny fanehoan-kevitry ny bilaogera tamin'ny fivoahany voalohany izahay
Azia Afovoany sy Kaokazy 02 Marsa 2018
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, nifantoka kokoa tamin'ny fanandratana ny sehatrin'ny fifandraisandavitra sy ny vaovao mifandraika amin'ny Aterineto ao Kazakhstana ny tontolon'ny bilaogy any.